Ilmo iska soo ridid ​​hore oo ah saddexda bilood ee ugu horreysa uurka - AMMAAN & SAAMEYN
Telehealth waa la heli karaa!
FCHC waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inaan hirgelinay Telehealth iyada oo qayb ka ah ballanta daryeelkaaga soo rididda ilmahaaga. Telehealth kuu ogolaanaya inaad la kulanto barayaasheena bukaan socodka si ay dib ugu eegaan taariikhdaada caafimaad, kula wareegaan xulashooyinkaaga, oo aad uga jawaabto wixii su'aalo ah ee aad qabto - waqti iyo goob kugu habboon! Faahfaahin intaas ka badan ka ogow bartayada Bogga taleefanka.
Ilmo iska soo ridka
Toos (Ilaa 12 Usbuuc)
Hurdo (Ilaa 15 toddobaad)
Haysashada ilmo soo rididda habsocodku waa ikhtiyaar AMMAAN & SAAMEYN oo loogu talagalay joojinta uurka.
Ilmo soo ridid ​​habsocod ah, oo sidoo kale loo yaqaan ilmo soo ridid ​​himilo ah, waxaa badanaa lagu maamulaa hab loo yaqaan hawo faaruq ah. Nidaamka laftiisa sida caadiga ah wuxuu qaataa shan ilaa toban daqiiqo oo keliya, waana adeeg caadi ah oo ku dhaca xafiiska dumarka ee xafiiska dumarka.
In kasta oo habraaca laftiisu soconayo oo keliya daqiiqado, waqti dheeri ah ayaa loogu baahan yahay diiwaangelinta, waraaqaha, adeegyada shaybaarka iyo soo kabashada. Fadlan qorshee inaad xafiiskayaga joogto 2.5 - 3 saacadood ballantaada daryeelka daryeelka ilmo soo rididda. (Haddii caadadaadii ugu dambeysay ay ka badneyd 12 toddobaad ka hor, fadlan qorshee inaad xafiiskayaga ku joogto ilaa 4 saacadood.)
Waxaad fursad u heli doontaa inaad la kulanto barahaaga bukaanka ah si aad ugala hadasho nidaamka iyo dareenkaaga iyo welwelkaaga ballantaada. Shaqaalaheennu waxay halkan u joogaan inay taageeraan oo ay caawiyaan labada bukaan iyo kuwa kula jooga khibradan.
Fiidiyowga hoos ku xusan, Dr. Jan Fruiterman, oo ah mid ka mid ah dhakhaatiirta cudurada haweenka ee guddiga shahaadada ee Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls, ayaa sharxaya soo rididda himilada:
Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church - Rabitaanka Ilmo soo rididda ilmaha
Daawo fiidiyowgaan on YouTube.
Waxaa laguu xilsaari doonaa bare bukaan socod ah oo u adeega sida u doodahaaga inuu kaa caawiyo waraaqaha, dib u eego ballantaada kana jawaabo su'aalahaaga. Ballantaada ayaa sonogram-kaaga la heli doonaa oo taariikhda caafimaadka la eegi doonaa, shaqada shaybaarka ayaa la qabtaa iyo daaweyn ka hor ayaa la bixiyaa ka hor inta aanad dib u qorin hawsha. Kuwani waa fursado muhiim kuu ah inaad la kulanto kooxdaada caafimaadka oo aad nasato.
Nidaamka soo rididda ilmo iska soo rididda waxaa fulin doona mid ka mid ah Guddiyadeena Certified Certified. Nidaamka laftiisa wuxuu qaataa dhowr daqiiqo oo caadi ahaan lama sameeyo illaa uurjiifka lagu sawirayo sonogram, badanaa ka dib uurka 5-6 toddobaad.
Diyaarinta afka ilmo-galeenka waxay dhacdaa kahor howsha iyada oo loo marayo maamulka misoprostol kaasoo jilciya afka ilmo-galeenka
Suuxdinta maxalliga ah (soo jeedka) ama suuxinta IV (hurdo) ayaa la qaataa
Qalabka caafimaadka ee nadiifka ah, diiriye iyo cannula, ayaa si tartiib ah looga dhex gelinayaa daloolka xubinta taranka haweenka, afka ilmo galeenka ee furan iyo minka.
Cannula wuxuu ku xiran yahay qalab bixin doona nuugista jilicsan ee loo baahan yahay si looga badbaadiyo nudaha uurka ilmagaleenka. Tani waxay samayn kartaa wax yar, dhawaq xanaaq badan.
Nidaamka ka dib, waxaan u oggolaaneynaa waqti ku filan oo soo kabasho ah qolka jiifka bukaankeenna. Waxaa lagaa saari doonaa tilmaamaha qoraalka iyo afka ah ee ku saabsan sida loo daryeelo naftaada iyo waxa la sameeyo haddii dhibaato kaa haysato.
Haddii aad tahay MA oo lagaa siiyo 'Sedation Sedation' waxaad noqon doontaa WADA - waad awoodi kartaa:
Qaado Tylenol ama Motrin 30 daqiiqo kahor waqtiga ballantaada.
Haddii aad leedahay IV Sedation (waad seexan doontaa) - waa inaad:
HA cunin, cabin, xanjo (waxba afka ha ku dhigin) 6 saacadood kahor ballantaada. Hubso inaad biyo cabto ka hor intaadan bilaabin soonka.
Fadlan qof soo kaxee si uu kuugu kaxeeyo guriga yourself naftaada kuma wadi kartid guriga.
Qorsheyso inaad joogtid xarunta ugu yaraan 3-4 saacadood. Waxaad ku heli doontaa 30 daqiiqo oo soo kabasho ah qolka jiifka.
KAhor nidaamkaaga soo rididda ilmaha
Ka fogow galmada maalin ka hor howsha
Ka fogow suulasha 48 saacadood ka hor hawsha
Ka fogow kiriimyada siilka ama daawooyinka 1 usbuuc ka hor howsha
Fadlan ha xidhin ciddiyaha ciddiyaha
DHAQAALKAaga soo rididda ilmaha ka dib
Dhiigbax siilka ah oo aan waxyeello lahayn iyo xoogaa raaxo-darro ah ayaa suurtagal ah isla markiiba qalliinka ka dib.
Haweenka qaarkood ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay isticmaalaan suufka dhowr maalmood qalliinka ka dib.
U hoggaansanaanta tilmaamaha takhtarka ee booqashooyinka la socoshada iyo wixii dib-u-baaris ah ee loo baahdo.
Waxaa lagu siin doonaa tilmaamaha daryeelka kadib oo ay ka mid yihiin ma jiro wax galmo ah ugu yaraan 1 toddobaad.
Qiyaastii 3 usbuuc ka dib howshaada, fadlan la xiriir FCHC si aad u heshid xaalad dabagal ah. Waxaad ku sameyn kartaa sidaas adoo na soo wacaya ama ka buuxinaya foomkeena dabagalka ah https://www.fallschurchhealthcare.com/follow-up .
Fadlan Ogow: Dhameystirka baaritaanka uurka ee uurka ka hor wicitaanka ka hor waxay ka caawin doontaa kalkaalisadayada qiimeyntaada dabagalka ah.
Waxaan kugu dhiiri galinaynaa oo aan kaa caawin doonaa inaad sahamiso xulashooyinka kala duwan ee qorshaynta qoyska / xakameynta dhalmada.
Macluumaad Dheeraad ah oo ku saabsan Ilmo iska soo rididda Nidaamka iyadoo la isticmaalayo Huufarka Vacuum
Xiriirka Ilmo iska soo rididda Qaranka: Waxaan Uur Leeyahay: Maxay yihiin xulashooyinka?
Xiriirka Ilmo iska soo rididda Qaranka: Ilmo soo rididda Muddada Koowaad: Isbarbardhiga habraacyada
Sidee ayuu u shaqeeyaa soo rididda nidaamka?
Sidee ilmo iska soo ridka qalliinka u shaqeeyaa?
Fadlan hoos ka eeg Nidaamyada Ilmo iska soo rididda Ilmaha ee daryeelka kadib.
Ilmo iska soo ridid ​​Nidaam ah
Waxaad sidoo kale kala soo bixi kartaa PDF-ga foomkaan deegaanka halkan.
MAXAA LAGA FILAYAA GURIGA
Maroojis, dhibco iyo / ama dhiig bax ayaa la filayaa.
Maroojisyada la midka ah xanuunka caadada waa caadi
Dhiigbaxu wuu joogsan karaa wuxuuna bilaaban karaa dhowr maalmood markiiba, ama waxaa dhici karta inuusan jirin wax dhiig ah haba yaraatee
Gudbinta xinjirowga inta dhiigbaxu caadi yahay
Dhiigbax iyo dhibco aan caadi ahayn ayaa socon kara 6-8 toddobaad
Kala hadal baritaanka joogtada ah iyo dhiigbaxa Qiimeyntaada Dabagalka ee khadka tooska ah / teleefoonka
Uurka hormoonnada hCG si tartiib tartiib ah ayuu u yaraadaa astaamaha uurkuna waxay ku yaraadaan 10-14 maalmood gudahood
Maxaa ka fogaanaya?
Haddii lagugu suuxiyay IV, ma wadid gaari ilaa maalinta xigta
Galmo malaha 7 maalmood
Wax siilka ku jira ilaa dhiigbaxu gaabiyo 3-7 maalmood
Tampono ama koobabka caadada malahan ilaa dhiigu ka yaraado 3-7 maalmood
Majiro dawooyinka siilka ama suumanka lagaarsiiyo ilaa dhakhtarku ku faro mooyee ilaa 7 maalmood
Sida ugu dhakhsaha badan ugana soo kabashada
Ku noqo waxqabadka caadiga ah maalinta xigta, oo ay ku jiraan qubeyska ama qubeyska
Ku raaxayso hawo nadiif ah iyo jimicsi
Ku daawee casiraad ibuprofen. Baakad qabow ama kuleyliyaha caloosha ama dhabarka hoose ayaa waxtar leh
Dhaqdhaqaaqa adag (qaadista culus, jimicsiga) ayaa kordhin kara dhiigbaxa, tani waa caadi
Filo muddo 4-8 toddobaad gudahood ah
Caadadaada ugu horreysa waxay ka sii cuslaan kartaa oo ka sii dheeraan kartaa, ku dar xinjirooyin leh casiraad ka xanuun badan sidii caadiga ahayd
Uurku wuxuu dhici karaa kahor xilligaaga xiga. Macluumaadka qorsheynta qoyska www.bedsider.org/methods
Kaadida hCG ee uureysiga uurku waxay noqon kartaa mid wanaagsan illaa 4-6 toddobaad. Wac haddii aad ka walwalsan tahay
Lacag dhimis ayaa loo heli karaa sii wadida adeegyada GYN
NAGA SOO WAC HADDII AAD KHIBRAD U LEH:
Qandho joogto ah - 100.4 ama ka sareysa 4 saacadood ama ka badan
Maroojis daran ama xanuun oo aan daawo ka caawin
Dhiigbax aad u culus: qooya maxi pad saacad kasta 2 saacadood oo isku xigta
Matag ama shuban joogto ah 24 saac ama ka badan
Muddo malahan 8 usbuuc ama astaamaha uurka ee joogtada ah
BUUXI QIIMEYNTA AAD SOO KORDHIN SADDEX TODDOBAAD KA DIB MARKII MAGACAABIDDA QOFKAAGA:
Khadka tooska ah: tag fallschurchhealthcare.com / dabagal ama Wac 703-532-2500.
Intii lagu gudajiray Xarunta Daryeelka Caafimaadka Kaniisada ee COVID ee faafa waxay bixisaa Qiimeyn Khadka Tooska ah ama Taleefanka ah
Kahor Qiimeyntaada Dabagalka dhammeystir kaadida uurka uurka hCG hormoonka lagu siiyay